Onye na-azụ atụrụ German Pitbull Mix - Nduzi nke Onye Nwezu - Reeddịrị
Onye na-azụ atụrụ German Pitbull Mix - Nduzi nke Onye Nwe Zuru ezu
Onye na-azụ atụrụ German bụ Pitbull Mix sitere na ụdị abụọ na-ezobe n'azụ ihere na-adịghị mma, na-eme ka ụdị a nwee mmasị dị ukwuu.
Na-agbasi mbọ ike, sie ike, nwee obi ike ma nwee ntụkwasị obi mana na-ahụ n'anya.
Arụmụka ahụ gara n'ihu, Ọkpụkpụ dị njọ ? Ma ọ bụ adụ na gooey n'ime?
Nkịta ngwakọ nke ruru sentimita 26 n'ogologo, na 70 ruo 90 n'arọ dị arọ, ha na-eme nkịta nche nchebe maka ezinụlọ ọ bụla. Nkịta na-arụ ọrụ site na okike, mana, ya na onye na-azụ ya kwesịrị ekwesị, maa nkịta na-eguzosi ike n'ihe.
N'isiokwu a, anyị na-ekpuchi ihe niile ịchọrọ ịma gbasara Pitbull German Shepherd Mix site na ọnọdụ ha, ịdị mfe nke nlekọta na mmega ahụ na ọzụzụ ha chọrọ.
Thisdị a nwere ike ịbụ ihe ziri ezi maka onye nwe nkịta nwere ahụmahụ dị ka gị? Nọgide na-agụ iji chọpụta.
German Shepherd Pitbull Mix Ama Ama
Reeddị Bdị Ngwakọta na ndị ọzọ
Nzube Na-arụ ọrụ / Ibe
Adabara Ndị nwere nkịta nwere ahụmahụ
Nha 18 ka 26 ″ (nwoke) na 17 ka 24 ″ (nwanyi)
Ibu ibu 40 ruo 90 lbs (nwoke) na 30 ruo 70 lbs (nwanyị)
Afọ ndụ 10 ruo 12 afọ
Agba dị iche iche Tan, nwa ma ọ bụ nwa
Iwe Dị ike, na-eguzosi ike n'ihe, nwee ọgụgụ isi ma na-ahụ n'anya
Omume kwa ụbọchị Elu - 90 nkeji mmega ahụ kwa ụbọchị
Arụ Ọrụ Level Agafe - Imega ahụ na - arụ obere ọrụ
Nri Nri Kwa .bọchị 1200 ka 2700 calories kwa ụbọchị (nwoke) 900 ka 2,100 calories kwa ụbọchị (nwanyi)
Okwu Ahụike Ndị A Maara Akpịrị ahụ (Atopic Dermatitis) na Canine Hip Dysplasia
Gịnị bụ olulu atụrụ? Nchịkọta izu
Bdị Okike na Mmalite
Etu esi lekọta Pitbull German Shepherd Mix
Ego ole ka olulu atụrụ ga-eri?
Onye ọzụzụ atụrụ German Pitbull Mix Training
Mara Nsogbu Ahụ Ike
Ọdịdị Onye Ọzụzụ Atụrụ German: Uwe mkpuchi, Agba na ejiji
Onye na-azụ atụrụ German na-eguzosi ike n’ihe ma nwee ọgụgụ isi gafere ya na American Pitbull Terrier siri ike na-amụ German Shepherd Pitbull Mix.
N'ịbụ ndị na-emekọ ihe ọnụ, German Shepherd Pitbull puppy amatabeghị nnukwu ụlọ ọrụ Kennel ọ bụla na ọ bụ naanị ndị na-azụ anụ a maara nke ọma.
A na-amụ nkịta a na-agwakọta agwakọta mgbe a Onye ọzụzụ atụrụ German (dam) na-ekpo ọkụ na di na nwunye nwere American Pitbull Terrier (sire).
Ogologo ahihia nke ulo ogwu German bu ihe di nkita ise rue asatọ na ugwo nwa nkita di n'etiti $ 200 na $ 600 USD. Bredị a abụghị ihe a na-ahụkarị ka onye na-azụ ihe dị mma nwere ike isi ike ịchọta.
Nkịta a na-agwakọta agwakọta nke ọma na-eme ka ha bụrụ ezigbo enyi na osimiri ọ bụla nwere nkịta
Iji ghọtakwuo akụkọ ihe mere eme na ọbụlagodi German Shepherd Pitbull mix na-azụ onwe ya, ọ dị mkpa ịmata ebe ha si bịa.
Onye Ọzụzụ Atụrụ German malitere na 1899 dịka nkịta na-azụ anụ na Germany . Ha bụ ndị nwere ọgụgụ isi ma na-arụsi ọrụ ike nke na-eme ka ha bụrụ oke osisi zuru oke maka ndị agha na ndị uwe ojii gburugburu ụwa. Achọpụtara Onye Ọzụzụ Atụrụ ahụ dịka otu n'ime ụdị ndị Germany ama ama.
American Pitbull Terrier bu kwa onye nwere ọgụgụ isi, onye sitere na ya site na udiri ehi na United Kingdom . Ozugbo ebutere umu a na America n'oge na-adighi anya ha nwetara aha ohuru nke “American Pitbull Terrier”. A zụlitere ha ka ha bụrụ nkịta na-alụ ọgụ siri ike mana n'oge na-adịghị anya, ha ghọrọ 'nkịta nkịta' n'ihi ọnọdụ ha dị nro na akụkọ dị egwu gburugburu ụmụaka.
Onye ọzụzụ atụrụ German Pitbull Mix pụtara na United States na 2000s. Dịka ị pụrụ ịhụ site n'ụdị nne na nna ha, ngwakọta a ga-abụrịrị ma nwee ọgụgụ isi ma nwee ịhụnanya, yana ịrụsi ọrụ ike.
Ọ bụ ihe nwute na ụdị a na-abụkarị ihe na-adịghị mma jikọtara ịbụ onye na-eme ihe ike ma dị oke egwu. Nke a enweghị ike ịga n'ihu n'eziokwu ahụ. Ọ bụghị banyere ụdị onwe ya mana karịa, Otú i si elekọta ya nke ọma ma bulie nwa gị.
Na ọzụzụ ziri ezi, mmega ahụ na ezi mmekorita , ụdị a dị ezigbo enyi na ịhụnanya n'ebe ndị òtù ezinụlọ nọ na-eme ka ha bụrụ nhọrọ dị oke egwu dị ka anụ ụlọ ezinụlọ.
Ha bụ ọbụna ụdị zuru oke maka ụmụaka, ọkachasị dị ka nne na nna ha (olulu) amara dika nwa nkita nanny .
Dị nnọọ hụ na ị bụghị nanị ịme nwa nkita gị nke ọma na obere ụmụaka ma kụziere ha ihe ndị bụ isi na-eme na donts nke otu esi emeso ezinụlọ gị anụ ụlọ; dị ka ị ga-enwe nkịta ọ bụla. Nwa gị kwesịrị ịhụ n’anya ma kwanyere ndị ezinụlọ gị niile ugwu, ma ndị nke ụkwụ anọ!
Ọ bụrụhaala na a na-enye nkịta a mmega ahụ kwa ụbọchị (ihe dị ka nkeji 90), yana ezigbo mbara ala mara mma, mgbe ahụ ha ga-adị mma na gburugburu ebe obibi ha ma ghara iburu omume adịghị mma dị ka ịta ata ma ọ bụ ịta ụja.
Bredị a adịghị mma maka obere ụlọ obibi ebe ha nwere ike dị elu. Họrọ maka ụdị obere ma ọ bụrụ na nke a bụ ikpe, dị ka feisty Jack Russell Chihuahua Mix .
Ngwakọta agwakọta a kachasị mma maka onye nwe nkịta nwere ahụmahụ.
Site na onye nwe ya ziri ezi, onye ghọtara mkpa ọ dị iso na mmekọrịta mmekọrịta na ọzụzụ na-agbanwe agbanwe, nke a nwere ike ịbụ ịhụnanya na ịdị mfe ilekọta nkịta. Otú ọ dị, ọ dị mkpa ka ị mee nyocha gị tupu ị tụlee ụdị ìgwè a.
Nri ziri ezi na-ekpuchi ihe ndị dị mkpa, yana kalori na protein kwesịrị ekwesị, dị mkpa na ụdị ọrụ dị ka German Pit.
Ná nkezi, nnukwu akwara na-arụ ọrụ na-achọ ihe dị ka calorie 30 nke ume kwa paụnd nke arọ ahụ. Agbanyeghị, enwere ike igbanwe nke a maka afọ ha, ogo ha na ogo ọrụ ha.
Calories kwa ụbọchị
Nwoke Carol dị 1,200 ruo 2,700
Nwanyi 900 ka calorie dị 2,100
Dịka ị pụrụ ịhụ, German Shepherd Pitbull Mix nwere nnukwu caloric chọrọ. Nhọrọ kachasị mma maka ụdị a bụ ịzụ ha nri pụrụ iche a kpụrụ akwa pụrụ iche maka akwa buru ibu ma na-arụ ọrụ.
German olulu ga-doro anya na-achọ a otutu kibble, n'ihi ya, ọ kasị mma kewaa feedings. Mgbe nwa nkịta, gbalịa kewaa nri n'ime nri abụọ ma ọ bụ atọ kwa ụbọchị.
Dị ka Mixes Shepherd ndị ọzọ , naanị site n'ile anya na ìgwè a, o doro anya na ha nwere ahụ siri ike ma sie ike.
Omume achọrọ maka ụdị a abụghị naanị 'ntuziaka' ma ọ dị mkpa na ha zutere. Na-enweghị mmega ahụ kwesịrị ekwesị, ụdị a nwere ike ịdaba n'ụdị omume na-ebibi ihe dịka ịkwa ụja, ịgwu ala ma ọ bụ ịta nri achọghị.
Ngwakọta German Pit Mix bụ n'ezie “gym-junkie” mmadụ nhata na ụdị nkịta. Ha hụrụ mmega ahụ n'anya ma chọọ ọtụtụ n'ime ya. A na-atụ aro na a na-enye ìgwè a ma ọ dịkarịa ala minit 90 mmega ahụ kwa ụbọchị.
Ọ bụghị nnukwu na-agba ọsọ? Gbalịa ịgba ígwè. Naanị wụkwasị na ịnyịnya ígwè gị ma jigide ngwongwo nwa gị ma hapụ ha ka ha gbaa n'akụkụ gị.
Ekwesịrị iji oge ọ bụla fọdụrụnụ rụọ ọrụ dị ka oge egwuregwu maka gị na nwa bebi gị. Nke a ga-enye gị na gị anọ-legged enyi ego daashi bonding oge na bụ ihe ọzọ dị ukwuu isi iyi nke uche mkpali nke ga-abụ ọbịa gị na nwa gị.
Nwere ike ịnwale egwuregwu nke Tụgharịa Cup !
Wepụta iko atọ ma ọ dịkarịa ala n'usoro
N'ihu nwa gị, zoo otu ọgwụgwọ n'okpuru otu iko
Gwa nkịta gị ka o tinye ụkwụ ya n’otu iko
Lelee ka nkịta gị na-eche nke iko nwere ọgwụgwọ
Nye nkịta gị ụgwọ ọrụ (nri ma ọ bụ otuto)
Egwuregwu a nwere ike iwe obere oge iji mụta ka nwee ndidi! Luckily, the German Pit bụ ndị nwere ọgụgụ isi ụdị ndị na-asọpụrụ nri ka ha wee nwee egwuregwu a chọpụtabeghị n'oge!
Ọ bụ eziokwu na a maara ụdị a maka ọgụgụ isi ha, agbanyeghị na ekwesiri ịdọ aka na ntị na ụdị a nwere ike bụrụ obere isi ike ma a bịa n'ihe omumu ọzụzụ.
Oghere German bụ n'ezie ụdị ìgwè nke ekwesịrị idobe maka ndị nwe nkịta nwere ahụmahụ, ma ọ nwere ike ọ gaghị abụ ihe kachasị mma maka ndị mbido mbụ.
Isi na abụọ dị iche iche onwe ha , nkịta a hụrụ n'anya ịnọ n'ọkwa dị ka onye ndu mkpọ. Ya mere, odi nkpa ka eweputa ezigbo azumatu.
Oge, ndidi na nkwado dị mma bụ isi ihe atọ dị mkpa nke onye nwe Pitbull German Shepherd Mix ga-asọpụrụ. E nwere ike ịnwa gị ọnwụnwa ịhapụ nwa nkịta isi ike; mana emela. Mmetụta na-adịghị mma na nkuzi nke ọchịchị abaghị uru yana nwere ike imetụta ọdịmma nke nkịta ya mere nweta ọtụtụ ọgwụgwọ na otuto dị njikere ( ikekwe ọbụna oporo ).
Ihe ndi mmadu choro
Mmekọrịta kwesịrị ekwesị na ngwakọta German Shepherd Pitbull kwesịrị ịbụ akụkụ nke atụmatụ ọzụzụ ọ bụla nwere nkịta hụrụ n'anya.
Ọ bụghị ihe nzuzo na nkịta dị ka Onye Ọzụzụ Atụrụ German na Pitbull ejirila aha otu agbụrụ na-eme ihe ike katọọ mmadụ. Ya mere, a na-atụkwa anya na nke a ụmụ ha agwakọtara .
Egosiputala na puppy socialization ebelata keesemokwu àgwà okenye ma nchegbu na egwu. Ya mere, kpachara anya na gị na nwa gị na-emekọrịta ihe ka ha nwee ohere dị elu nke ịbụ ezigbo onye otu ezi na ụlọ.
Mmekọrịta nke nkịta gị dị mfe, mana, na-ewe oge. Ihe ikwesiri ime bu ka ikwuputa nwa nkita gi n’ebe ndi mmadu no, n’udi di iche-iche. Nwere ike ịnwale:
Agbata obi na-ejegharị
Nkịta enyi na enyi ogige
Doggy ụbọchị na-elekọta
Ebe ndị a niile na-enyere enyi gị na ndị enyi gị na ndị mmadụ aka yana mmekọrịta dị iche iche nke nwere ike ịgụnye ma ọ bụ gbanyụọ mmekọrịta gị.
N'ebe a, anyị ga-eme ka ị mara nsogbu ahụike abụọ a maara nke Pitbull German Shepherd Mix.
Okpukpo Hip Dysplasia
Onye Ọzụzụ Atụrụ German nwere ike ịmalite Hip Dysplasia , ma nwee ike ibunye ya nwa gị. A na - ahụ ọrịa a site na nrụrụ na nkwonkwo akwara canine. Nke a nwere ike ibute lameness na mgbu na-aga n'ihu.
The American Pitbull Terrier maara na-enwekwu ngwangwa ka nfụkasị mmeghachi omume dị ka Ọkpụkpụ Atopic .
Atopic dermatitis bụ akpụkpọ anụ ọkụ nke nwere ike ịmalite n'ihi ihe ndị metụtara gburugburu ebe obibi dị ka ahịhịa, na ebu spores.
Iji gbochie njupụta na pup gị jide n'aka na ị ga-edebe ụlọ gị ọcha ma lezie anya maka ojiji pesticide na ogige ntụrụndụ!
Dịka ị pụrụ ịhụ, ụfọdụ n'ime ụmụ nkịta ha bụ ezigbo ngwakọta nke nne na nna dị ọcha.
N'adịghị ogologo ha, ụdị a siri ike ma guzo ogologo ya na nwoke ahụ ruru sentimita 26 n'ịdị elu na 90 n'arọ n'ibu.
Ihu ha na-adịkarị ka nne na nna Pitbull nwere nnukwu isi, obere mkpụmkpụ ma na-ehulata ala. Mgbe ụfọdụ, ha nwere ike inwe ogologo ọnya dịka Onye Ọzụzụ Atụrụ German, ọ dabere n'ezie na nkịta puppy-by-puppy.
Oghere ndị German nwere ahụ dị egwu nke kpuchiri obere uwe na ọkara na akwa (dabere na ụdị mkpụrụ ndụ ihe nketa ha). Uwe ha nwere ike ịbụ onye nne na nna ọzụzụ atụrụ German ma ọ bụ nne na nna ha Pitbull na-achịkwa uwe ha. Ka o sina dị, ajị anụ ha na-achakarị ajị ojii. Uwe mkpuchi ndị ọzọ gụnyere nwa na ọbụna fawn.
O doro anya na ọdịdị nke German Shepherd Pitbull Mix nwere ike ịdịgasị iche iche na mkpofu ọ bụla nwere ike ịnwe ụmụ nkịta dị iche iche. Ma echegbula na ha niile siri ike, muscular na nnukwu.
Ihe eji achọ nwoke ma ọ bụ nwanyị chọrọ
Ihe ndi choro ka ha choro dika ndi otua kariri nke ndi German Shepherd Pitbull Mix puppy.
Iji maa atụ, Onye Ọzụzụ Atụrụ German nwere akwa mkpuchi abụọ nke na-awụkarị. Ọ bụrụ na uwe nwa nkita gị yiri nne na nna ọzụzụ atụrụ German mgbe ahụ, ịmịchachacha mgbe niile bụ ihe dị mkpa. Otú ọ dị, ọ bụrụ na uwe nwa gị na-ewere nne na nna ha Pitbull mgbe ahụ, ịmachapu mgbe niile abụghị nnukwu ihe dị mkpa n'ihi na o yighị ka uwe nkịta dị nkịta gị ọ ga-awụpụkarị.
N'ihe banyere ndozi nwa nkita na-aga n'ihu, German Shepherd Mix enweghị ihe ọ bụla achọrọ. E kwesịrị ịga mbọ na mbọ ịsa ahụ na mbọ dị ka mkpa.
Echefula nlele eze oge niile iji belata ohere nke ọgwụgwọ eze achọghị, gbalịa na-ehicha ezé gị anya .
Loyaldị na-eguzosi ike n'ihe, nke nwere ọgụgụ isi, na-echebe ma nwee obi ike. Zuru okè maka onye nwe nkịta nwere ahụmahụ nwere ndụ ndụ.
Site na ike dị elu na ọzụzụ chọrọ, tinyere egwuregwu na ike siri ike, nkịta a dabara na ezinụlọ ma ọ bụ onye ọ bụla nwere mmasị.
Site n'usoro ochichi na-agbanwe agbanwe ma na-agbanwe agbanwe, ụdị a nwere ike imeghari ka ọ bụrụ ezigbo mgbakwunye ụkwụ anọ na ụlọ ịhụnanya.
Ọ bụrụhaala na ị maara ọkwa ike ha dị elu ma nwee ike ịnabata ụdị a, mgbe ahụ, ị ​​gaghị enwe nsogbu ịnabata ha n'ime obi gị.
Hapụ ihere na-adịghị mma, ụdị a dị ka ịhụnanya ka ị na-eme. A German Shepherd Pitbull Mix ga-enwe ọnọdụ n'obi obi ha maka gị. Kọọrọ gị ahụmahụ gị na ụdị a n'okpuru.
Nkịta aha Generator (N'ime aha 10,000)
Jack Russell Terrier Dog Breed Information na Ajụjụ
odo labrador ọlaedo retriever mix
ọ bụ ihe nkịtị ka nkịta racha ụkwụ ha
ogologo ntutu chihuahua mix ụmụ nkịta
ụlọ nyocha chọkọletị na ụmụ nkịta rottweiler
alaskan husky australia onye ọzụzụ atụrụ mix